ဒူဘိုင်းတွင် Affiliate Blogging | အလုပ်အကိုင် - အလုပ်ရှာဖွေရေးခရီး
ဒူဘိုင်းအတွက် Affiliate ဘလော့ဂါ
ဒူဘိုင်းအတွက်ဘလော့ရေးသော Affiliate တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည် အွန်လိုင်းငွေရှာဖို့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါတောင်မှစတင်ငွေရှာဖို့ကြိုးစားနေကြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အထဲကစတင်ပျက်ကွက်တဲ့သူဘလော့ဂါများအပေါ်စာရင်းဇယားပင် scarier ပါ! သငျသညျ - ကသတငျးကောငျးသင်သည်မည်သည့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုယူရန်မလိုပါကြောင်း နိုင် အောင်မြင်တဲ့ဘလော့ဂါဖြစ်လာ သငျသညျကြိုးစားခဲ့နဲ့စစ်မှန်တဲ့နည်းစနစ်များအသုံးပြုတဲ့အခါ!
ဘာလို့လဲဆိုတော့တဦးတည်းကဤလမ်းညွှန်၏, ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှာရှည်လျားပြီးခက်ခဲကိုကြည့်လိုက်ပါ is ဘလော့ဂ်ကတဆင့်ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုရန်သင့်လက်မှတ်။ သငျသညျရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး '' မယ့်အခြားဘလော့စတင်ရန်'' ။ သငျသညျအသွားအလာရရှိသွားတဲ့နှင့်အရောင်း left နှင့်ညာဘက်စေသည်ဘလော့ဂ်စတင်နိုင်ပါသည်။
ဒါဟာ Affiliate Marketing ကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်ဖို့မခဲယဉ်းပါတယ်။ ဘာထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းထက်ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်, paid နှင့်အမိန့်ပွညျ့စုံသို့မဟုတ်အရာအားလုံးထက်ကိုင်တွယ်ရန်ရှိခြင်းမဟုတ်တဲ့? ဒါဟာငွေရှာဖို့အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းဖွင့်, သငျ Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပေါင်းစပ်နှင့် blogging သည့်အခါ ရလဒ်များကိုကိုလညျးမတားဆီးများမှာ.
စူပါ Affiliate ဘလော့ဂါ ၎င်း၏အဓိကမှာ blogging တခုတခုအပေါ်မှာ ebook ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်အခြားစာအုပ်တွေထက်ကွဲပြားခြားနားသော slant ကြာပါသည်။ ဒါဟာတဦးတည်းကိုသင်အခြားသူတွေနဲ့တူတာကို blogging အပေါ်စတင်ရန်ကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက် Affiliate စျေးကွက်ကယ့်ကိုဆိတ်ကွယ်ရာဒီတစ်ခုသတ်မှတ်။
(အခြေခံနှင့်အဆင့်မြင့်သတင်းအချက်အလက်ဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်) သင့်ဘလော့ဂ်ကို set up
သော့ချက်စာလုံးများကိုသုံးပါနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန် SEO ဆိုသည်မှာမဟာဗျူဟာများ
Link ကိုကူးလူးဖလှယ်မှုကိုသုံးပါနှင့် ယာဉ်အသွားအလာကားမောင်း၏အခြားနည်းလမ်းများ
အခုတော့သူတို့သည်သင်ဘလော့ဂ်နှင့်အတူစတင်ရန်သင်မည်သို့ပြောပြကြောင်းအများဆုံး ebooks ထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အရာဖြစ်ကြ၏။ ဒါဟာအစအပေါ်အလွန်ကြီးမားသောအပိုင်းပါရှိသည် Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ်သမျှ Affiliate စျေးကွက်ကဘာလဲဆိုတာကနေဖုံးလွှမ်းနေပါတယ် ပိုပြီးအဆင့်မြင့်နည်းစနစ်မှ.
ဒူဘိုင်းအတွက် Affiliate ဘလော့ဂ် Start မှဘယ်လိုနေသလဲ?
ဤအချက်အလက်ကယ့်ကိုအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်မ ပိုပြီးအဆင့်မြင့်သဘောတရားများကိုဦးတည်သွားစေ - အနည်းငယ်လည်းလျင်မြန်စွာ။ စာအုပ်ရဲ့တာမျှမျှတတလွယ်ကူသောမဟာဗျူဟာအာရုံစိုက်နေစဉ်, ဒါကြောင့်မကြာမီနှိပ်ပြီးဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင် Per Pay ကိုနှင့်အတူပြည့်စုံတစ်ခုတစ်ခုလုံးကို Affiliate စျေးကွက်ကတော့တက် setting များကဲ့သို့အမှုအရာမှပြန်သွားလေ၏။
ဒါဟာခဏတစ်ဘို့ဤလုပ်နေခဲ့ကြသူလူတို့အဘို့အားလုံးမှာပြဿနာမဖြစ်သင့်ပေမယ့်အသစ်များကိုနေသောသူတို့ကိုဖြစ်ကောင်းအလွန်စိတ်ပျက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဖို့လိုမသာ ဤနည်းဗျူဟာသုံးပြီး Blog သို့မည်သို့လေ့လာသင်ယူဒါပေမယ့်သူတို့ကလည်းတစ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာ code ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသူတို့ရဲ့ဘေးဖယ်-In box ကိုထွက်တွက်ဆ, AND PPC အပေါ်အခွင့်အလမ်းကိုယူ, အခြားအမှုအရာတို့တွင်အဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သူကပြောပါတယ်ခံနှင့်အတူ, ဤအပိုင်းကိုသူကအဆင်သင့်နေသောလူများအတွက်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်ဖြစ်ကောင်းအချို့သည်းခံခြင်းနှင့်အတူကကိုင်တွယ်နိုငျသညျ, သို့သော်အချို့ဖွယ်ရှိနည်းနည်းလွှမ်းမိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်.
ယာဉ်အသွားအလာမှတလျှောက် Moving - ငါတို့သည်တကယ်ဤအပိုင်းကိုကြိုက်တယ်! ဒါဟာ RSS feeds ကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုတင်သွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အတိမ်အနက်ကိုပိုမိုသွား၏ ကျွန်တော်တို့ဟာယခုအချိန်အထိပြန်လည်သုံးသပ်င့်ကိုအခြားလမ်းပြထက် directory များမှ။ ယာဉ်အသွားအလာရတဲ့အတှကျအငျတာနကျပျေါတှငျအဆင့်နှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ကိုအမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအရာသည်အလွန်အရာဖြစ်၏။ ဂိမ်း၌ဤအချက်မှာ RSS feeds နှင့် ပတ်သက်. အသိပညာအလွန်အရေးကြီးသည်။
ဤသည်အထုပ်အခြို့သောအပိုဆုကြေးငွေနှင့်အတူကြွလာ ကြောင်းကယ့်ကိုကပြည့်စုံစေရန်ကူညီပေးရန်။ ပထမဦးစွာ, သင်သည်သင်၏ဘလော့ဂ်ပိုကောင်းအောင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု codes တွေကိုစာရင်းတစ်ခုရှိသေး၏။ ဤရွေ့ကားမဖြစ်မနေ-ပြီ။ သူတို့ကအကောင်အထည်ဖော်ရန်လွယ်ကူသော်လည်း, များလွန်းမဟုတ်လူတွေကလုပ်ပါ။ ဒါကသင်ယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါ်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ကိုငါပေးမည်။
သင့်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တို့သည်ကြီးစွာသောဝင်ငွေအတွက်ဆွဲထုတ်ဖို့ထိပ်တန်း Affiliate ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှင် Affiliate ဘလော့ဂါတစ်ဦးမျှမ-brainer ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျစသညျ, စာရင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်, ဆင်းသက်စာမျက်နှာများကိုတညျဆောကျခငျြဘူးဆိုရငျ သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်နှင့်အတူသွားချင်ပေမည်။ သငျသညျပြီးသားအောင်မြင်သောနေသော Affiliate စျေးကွက် blogging ၏ခြေရာကိုနင်းလိုက်လျှောက်ရန်လိုလျှင်သင်အမှန်တကယ်ဒီထုတ်ကုန်မှားမသွားနိုင်ပါ။
Shahbaz Khan က Badil (ပါကစ္စတန်) By-
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသင်အခုလမ်းညွှန်များရနိုငျသညျ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်။